तपाईँं पछिल्लो तीरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ स्वत: पाठ प्रतिमा Insert पट्टी, र त्यसपछि तपाईँंले घुसाउन चाहनुभएको स्वत पाठ रोज्नुहोस् गर्नुहोस्.
रोज्नुहोस् सम्पादन - स्वत:पाठ
घुसाउने उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्
स्वत:पाठ प्रयोग गर्दा
The स्वत पाठ संवाद सूची स्वत पाठ कोटिहरू र प्रविष्टिहरू.
टाइप गरेको बेला सुझावको रूपमा नामको शेष प्रदर्शन गर्नुहोस्
एउटा स्वत: पाठ प्रविष्टिमा मिल्दो तपाईँले टाइप गर्नु भएको शब्दको पहिलो तिन अक्षरहरू पछि मद्दत टिपको रूपमा पुरा गर्नका लागि एउटा सुझाव प्रर्दशन गर्दछ । सुझाव स्विकार गर्न, 'प्रविष्ट गर्नुहोस्' थिच्नुहोस् । यदि तपाईँले प्रविष्ट गर्नु भएको मिल्दो एक भन्दा बढी स्वत: पाठ भएमा, पूरै प्रविष्टिहरू उन्नत गर्न Ctrl+Tab थिच्नुहोस् । उदाहरणका लागि, डमी पाठ प्रविष्ट गर्न, "Dum" टाइप गर्नुहोस्, र त्यसपछि 'प्रविष्ट गर्नुहोस्' थिच्नुहोस् ।
हालमा चयन गरिएको स्वत: पाठ द्रष्टव्यको नाम सूची गर्नुहोस्. यदि तपाईँंले पाठ कागजातमा चयन गर्नुभएको भए, नयाँ स्वत: पाठ द्रष्टव्यको नाम नाम टाइप गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् स्वत: पाठ बटन, र रोज्नुहोस् गर्नुहोस् नयाँ.
रोज्नुहोस् गरिएको स्वत पाठ प्रविष्टिका लागि सर्टकट प्रदर्शन गर्दछ. यदि तपाईँं नयाँ स्वत पाठ प्रविष्टि निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने,सर्टकट टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईँं प्रविष्टिका लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ.
स्वत: पाठ कोटिहरू सूची गर्नुहोस्. कोटिमा स्वत: पाठ द्रष्टव्यहरू अवलोकन गर्नका लागि, dकोटिमा डबल-क्लिक गर्नुहोस्, वा योगफल सङ्केत (+) कोटिको नजिक क्लिक गर्नुहोस्. हालको कागजातमा स्वत: पाठ entry घुसाउनका लागि, सूचीमा द्रष्टव्य चयन गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् घुसाउनुहोस्.
एउटा कोटिबाट अर्कोमा तपाईँं स्वत पाठ प्रविष्टिहरू तानेर छोड्न सक्नुहुन्छ.
हालको कागजातमा रोज्नुहोस् गरिएको स्वत पाठ घुसाउनुहोस्
यदि तपाईँंले अनुच्छेदमा प्रारूप नभएको स्वत पाठ प्रविष्टि घुसाउनु भयो भने, प्रविष्टि हालको अनच्छेद शैली सँग प्रारूप हुन्छ
थप स्वत पाठ आदेशहरू प्रदर्शनका लागि क्लिक गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, हालको कागजातको पाठ रोज्नुहोस् बाट नयाँ स्वत पाठ प्रविष्टि निर्माण गर्नुहोस् ।
चयनबाट नयाँ स्वत: पाठ द्रष्टव्य निर्माण गर्नुहोस् जुन तपाईँंले हालको कागजातमा बनाउनु भएको थियो. द्रष्टव्य हालमा चयन गरिएको स्वत: पाठ कोटिमा थप गरिन्छ. तपाईँं यो आदेश देख्नु भन्दा पहिले तपाईँंले पहिला नाम प्रविष्ट गर्नुपर्दछ.
नयाँ (पाठ मात्र)
क्लिपबोर्डमा रोज्नुहोस् गरिएको स्वत पाठको प्रतिलिपि गर्दछ.
हालको कागजातमा बनाइएको रोज्नुहोस् सँग रोज्नुहोस् गरिएको स्वत पाठ प्रविष्टिको सामाग्रीहरू बदल्नुहोस्.
पुन: नामकरण गर्नुहोस्
स्वत: पाठ पुन: नामकरण गर्नुहोस् संवाद खोल्दछ, जहाँ तपाईँले चय गरिएको स्वत: पाठ प्रविष्टिको नाम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।
बिभिन्न कागजातमा सम्पादन गर्नका लागि चयन स्वत: पाठ द्रष्टव्य खोल्नुहोस्. परिवर्तनहरू गर्नुहोस् जुन तपाईँं चाहनुहुन्छ, रोज्नुहोस् गर्नुहोस् फाइल - स्वत: पाठ बचत गर्नुहोस्, र रोज्नुहोस् गर्नुहोस् फाइल - बन्द गर्नुहोस्.
म्याक्रो मानाङ्कन गर्नुहोस् संवाद खोल्दछ, जहाँ तपाईँले चयन गरिएको स्वत: पाठ प्रविष्टमा एउटा म्याक्रो संलग्र गर्नुहुन्छ ।
तपाईँं म्याक्रोहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन केही प्रदान गरिएको स्वत: पाठ द्रष्टव्यहरू स्वत: पाठ द्रष्टव्यहरूमा लिङ्क गरिएको थियो जुन तपाईँंले निर्माण गर्नु भएको छ. स्वत: पाठ द्रष्टव्यहरू निर्माण गर्नु पर्दछ "text only" विकल्प सँग. उदाहरणका लागि, स्ट्रिङ घुसाउनुहोस् <field:company> स्वत: पाठ द्रष्टव्यमा, र LibreOffice ले स्ट्रिङ बदल्दछ अनुकूल डाटाबेस फाँटको सामाग्रीहरू सँग.
संवाद खोल्नुहोस् जहाँ तपाईँं MS 97/2000/XP शब्द कागजात वा टेम्प्लेट चयन गर्न सक्नुहुन्छ, AutoText द्रष्टव्यहरू समावेश सहित जुन तपाईँं आयात गर्न चाहनुहुन्छ.
जोड्नुहोस्, पुन: नामकरण, वा स्वत पाठ कोटिहरू मेटाउनुहोस्.
चयन स्वत: पाठ कोटिको नाम प्रदर्शन गर्नुहोस्. कोटिको नाम परिवर्तन गर्नका लागि, नयाँ नाम टाइप गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् पुन: नामकरण. नयाँ कोटि निर्माण गर्नका लागि, नाम टाइप गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् नयाँ.
निर्देशिकामा हालको बाटो प्रदर्शन गर्नुहोस् जहाँ चयन स्वत: पाठ कोटि फाइलहरू सङ्रह गरिन्छ. यदि तपाईँं स्वत: पाठ कोटि निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने, चयन गर्नुहोस् जहाँ तपाईँं कोटि फाइलहरू सङ्रह गर्न चाहनुहुन्छ.
नयाँ स्वत: पाठ कोटि निर्माण गर्दछ तपाईँंले राख्नु भएको नाम सँगै Name बाकस.
रोज्नुहोस् गरिएको स्वत: पाठ कोटि तपाईँंले राखेको नाम सँग नाम बाकस.
हटेको स्वत: पाठ कोटिहरू र अनुकूल बाटोहरूको सूची.
ले चयन गरिएका तत्व वा पुष्टि नभईकन तत्वहरू मेट्दछ।
जडान सम्बन्ध बचत गर्नुहोस्
यो क्षेत्र प्रयोग गर्नुहोस् LibreOffice स्वत पाठ निर्देशिकामा जडानहरू जोड्नुहोस्.
जडान स्वत पाठ निर्देशिकाहरू तपाईँंको कम्प्युटर सँग सम्बन्ध छ.
जडान इन्टरनेटमा फाइलहरू सम्बन्धित छ.
Title is: स्वत: पाठ